ဖတ်ဖြစ်တဲ့စာအုပ်တွေ..တွေးမိတဲ့အတွေးတွေ.. | Ma Shwe Mi
မြသန်းတင့်-ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ၂၈	မြသန်းတင့်-ကျွန်တော်နှင့် ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ၂၉
1. K | January 6, 2011 at 3:20 pm
မရွှေမိ ရဲ့..စာအုပ်စင် ကြီး မြင်ပြီး သကာလ.. ဒီစာ ကို သေချာ မြင်ယောင်ပြီး ဖတ်လို့ ရသွားတယ်။း)
အောင်ဖြိုး နဲ့ ၂ ယောက်ပေါင်းပြီး.. စာအုပ်ဆိုင် ဖွင့်ကြပါလား..။
သော်တာဆွေ စာအုပ် သတင်းလေး စိတ်ဝင်စားသွားတယ်..ဟုတ်မယ်နော်..
တက္ကသိုလ် ရာပြည့် ကြရင်.. တွေ့ ရမဲ့ လူ နောက်တယောက် တွေ့ ပြီ..။း)
2. RITA | January 6, 2011 at 10:06 am
ငုပွင့်ဝါခိုင် ကို 10 တန်းအောင်ပြီးကာစက ဖတ်ခဲ့ဖူး ကြိုက်ခဲ့ဖူးတယ်။ ငှားဖတ်ခဲ့တာ။ မြနှောင်းညိုကိုလည်း သိပ်သဘောကျတယ်။ “အသည်းပန်းမှာ ဆူးတွေနဲ့” ကတော့ ကျောင်းမပြီးခင် ဝယ်ဖတ်ဖြစ်တဲ့ စာအုပ်။ သဘောအကျဆုံးစာအုပ်။ အဲဒီထဲက ဇာတ်ကောင်တွေ အပြင်မှာ ရှိနေသလိုပဲ။
3. မောင်မျိုး | January 6, 2011 at 9:55 am
ကျနော်လည်း ဒီမှာ စာကြည့်တိုက်ကဒ်လေး လုပ်ပြီး စာအုပ်တွေငှားဖတ်နေတယ် သိပ်တော့ မစုံပေမယ့် အဟောင်းတွေ များသား သုမောင် ရဲ့ ကွမ်းစကား ၊ ခင်ခင်ထူး ရဲ့ အညာသူအညာသားကျမဆွေမျိုးများ ။ အောင်ပြည့်ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်ဖတ်ချင်သေးတယ် ။